घरझगडा साम्य पार्न लोग्नेस्वास्नीले आफैं लगाए ३ महिना हतकडी - नागरिक रैबार
घरझगडा साम्य पार्न लोग्नेस्वास्नीले आफैं लगाए ३ महिना हतकडी
घरमा दिनदिनै हुने झगडालाई मथ्थर पारेर सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि युक्रेनमा एक दम्पत्तिले अनौठो उपाय अपनाएका छन् ।
उक्त दम्पत्तिले ३ महिनाका लागि आफूले आफैंलाई हतकडी लगाएका छन् र त्यसपछिको अनुभवलाई नियमित रुपमा सोसल मिडियामा शेयर गरेका छन् ।
पेशाले अनलाइनमा कार बिक्री गर्ने ३३ वर्षका अलेक्जेन्डर कुडले र ब्युटिसियन २८ वर्षीया भिक्टोरिया पुस्तोभिटोभाले गत भ्यालेन्टाइन्स डे बाट उक्त प्रयोग सुरु गरेका हुन् । त्यसयता उनीहरुका इन्स्टाग्राममा हजारौँ फलोअर्स थपिइसकेका छन् ।
युक्रेनको पूर्वी सहर खार्किभस्थित आफ्नै निवासमा रोयसर्टसँग कुरा गर्दै कुडले भन्छन्ः दिन बित्दै जाँदा यसमा हामीलाई बानी पर्न थालेको छ र सजिलो हुँदै गएको छ ।
दिनहुँ झगडा हुने भएकाले पत्नीले डिभोर्स गर्न चाहेपछि उनलाई यस्तो आइडिया आएको रहेछ ।
उनी भन्छन्, ‘हामी हप्तामै एक दुईपटक झगडा गरिरहेका हुन्थ्यौँ । एक दिन झगडा हुँदा भिकाले डिभोर्स गरेको भए हुन्थ्यो भनेर भनिन् । त्यसपछि तिमीलाई मैले आफैंमा जोड्छु भन्ने जवाफ दिएँ ।’
सुरुमा पुस्टोभिटोभाले पतिको उक्त आइडिया अस्वीकार गरिन् । तर पछि उनी पतिको हातमा आफ्नो हात जोडेर हतकडी लगाउन तयार भइन् । यो रोचक अनुभुति हुने र त्यसले जिवनमा यसअघि कहिल्यैपनि अनुभुत गर्न नपाएको चम्किलो भावनात्मकता ल्याउने हुनाले आफुले त्यो प्रयोगलाई स्विकार गरेको उनी बताउँछिन् ।
अहिले उनीहरुले हातमा हतकडी लगाएको एक महिना पुगिसकेको छ । यसबीचमा उनीहरु एक अर्काबाट छुट्टिन पाएका छैनन् । सपिंग देखि ट्वाइलेट सम्म उनीहरु सँगै हुन्छन् । आफ्नो सहअस्तित्वका तस्वीरहरु अहिले उनीहरुले दिनहुँ इन्स्टाग्राममा पोष्ट गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु अहिले युक्रेनका सञ्चार माध्यमहरुमा पनि छाइरहेका छन् । टेलिभिजनहरुमा सँगै अन्तरवार्ता दिन जान्छन् ।
हुनत हतकडी लगाउँदा समेत उनीहरुबीचको झगडा पूर्ण रुपमा निर्मूल भैसकेको छैन । तर अहिले झगडा भएपछि झोला कसेर घरबाट एक्लाएक्लै निस्किने छुट उनीहरुलाई छैन । झगडा हुँदा उत्कर्षमा पुगेर पनि कुरा मिलेन भने एकमात्र विकल्प बोल्दै नबोल्नु हुन्छ । तर पनि सँगै त बस्नै पर्दछ ।
भारतमा कोरोनाः मध्यप्रदेशका तीन शहरमा आजदेखि लकडाउन
कोरोना भाइरस महामारीले केवल विश्वमा स्वास्थ्य संकट मात्र ल्याएको छैन, यसले पर्यावरणलाई समेत खतरामा पारेको छ । कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि मास्क अहिले अनिवार्य अंगजस्तै बनेको छ । विश्वमा ठूलो परिमाणमा प्रयोग भइरहेको फेस मास्क साँच्चिकै पर्यावरणीय चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ । प्रयोग भएर फ्याँकिएका मास्कको फोहोरबाट उत्पन्न वातावरणीय चुनौतिलाई कम गर्नका लागि वैज्ञानिकहरुले […]
आधुनिक बन्दै भिखारीहरु, दान लिनका लागि डिजिटल भुक्तानी
एकातर्फ चीन विश्वमै तीव्र गतीमा गरिबी निवारण गर्ने देश बनिरहेको छ भने अर्कोतर्फ चिनियाँ भिखारीहरु समेत दिन प्रतिदिन आधुनिक हुँदै गएका छन् । तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्दछ कि चीनका भिखारीहरुले हालैका दिनहरुमा भिख माग्नका लागि डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग गर्न थालेका छन् । विज्ञापन चीनमा प्रविधिको तीव्र विकासका कारण मानिसहरुमा नगदको साटो बैंक कार्डबाट भुक्तानी […]
एउटा यस्तो गाउँ ! जहाँ बस्नको लागि एउटा अंग काट्नुपर्छ !
हुन त संसारका जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गर्नेहरुले पनि विभिन्न नियम कानून तथा शर्तहरु पालना गर्नुपर्दछ। तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो ठाउँ छ, जहाँ बस्नका लागि आफ्नो शरीरको एउटा अंग नै काटेर फ्याक्नु पर्दछ। हो, अन्टार्कटिका महादेशमा पर्ने भिल्ला लस एस्ट्रेलस नामक गाउँमा जान र बस्नका लागि शरीरको एउटा अंग काट्नै पर्दछ । उक्त गाउँमा गएर […]
महामारी नियन्त्रणका लागि मास्कको प्रयोग, यस्तो छ रोचक इतिहास
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बँच्नका लागि अनुहारमा मास्क लगाउनु अहिले विश्वका सबै मानिसको अनिवार्य दिनचर्या नै बनेको छ । पछिल्लो १५ महिनादेखि विश्वमा सर्वाधिक प्रयोग भैरहेको वस्तु बनिरहेको मास्कको इतिहासचाहिँ पुरानो छ । अहिलेभन्दा झण्डै १ सय १० वर्षअघि एक घातक महामारी नियन्त्रणका लागि एकजना वैज्ञानिकले मास्कको आविष्कार गरेका थिए । विज्ञापन वू लिन तेह […]
ट्रम्पको बुद्ध मूर्ति चीनमा लोकप्रिय, धमाधम बिक्री हुँदै
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुद्धको जस्तै आसनमा बसेको स्वरुपमा तयार पारिएको मूर्ति चीनमा लोकप्रिय बनेको छ । चिनियाँ इकमर्श प्लाटफर्ममा ट्रम्पको उक्त बुद्धासनलाई बिक्रीमा राखिएको छ । उक्त मूर्तिका बिक्रेताका अनुसार विश्वमा ट्रम्पले जत्तिको बुद्धिज्म जानेको अरु कोहीपनि छैन । विज्ञापन सानो आकार अर्थात १.६ मिटर अग्लो ट्रम्पको उक्त मूर्तिको चिनियाँ ईकमर्श साइट ताओबाओमा […]
जापानमा एकजना वैज्ञानिकले अहिलेसम्मकै नौलो तथा अनौठो अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । उक्त अनुसन्धानका लागि सरकारी अनुदान समेत प्राप्त हुन सुरु भएको छ । वैज्ञानिकले उक्त अनुसन्धानका क्रममा पशुहरुको गर्भमा मानव कोशिकाको विकास गर्ने प्रयास गर्नेछन् । यदि उक्त अनुसन्धान सफल भएमा जनावरलाई मानिसको सरोगेट मदरको रुपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । अर्थात् जनावरको कोखबाट मानिसको […]